यी हुन कलेजो बिग्रिएको थाहा पाउने संकेतहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी हुन कलेजो बिग्रिएको थाहा पाउने संकेतहरु !!
कलेजो शरीरको छालाभन्दा दोस्रो ठूलो अंग हो । अन्य अंगहरु जस्तै कलेजो पनि शरीरको महत्त्वपूर्ण अंग हो । यसको सम्बन्ध पाचन प्रक्रियासँग हुन्छ । कलेजोले काम गर्न छोड्यो भने मानिसको निधन हुन्छ ।
छाला पहेँलो हुँदै जानु=कलेजोमा समस्या आयो भने शरीरका छालाहरु पहेँलो हुँदै जान्छन् । त्यसैगरी, आँखामा पनि पहेँलोपन बढ्दै जान्छ । पिसाबमा पनि पहेँलोपना बढ्दै गयो भने कलेजोको समस्या हुनसक्छ समयमै उपचार गराउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
रगत बान्ता हुनु= कलेजोको समस्या बढ्दै गयो भने रगत बान्ता हुन थाल्छ । बान्तामा रगतको छिर्का देखियो भने कलेजोको समस्या हुनसक्छ ।
कमजोरी=परिश्रम गर्नुपर्ने काम नै नगरी बारम्बार थकान र कमजोरी महसुस हुन्छ । त्यस्तै निन्द्रा पनि कम लाग्न थाल्छ भने कलेजोको समस्या हुनसक्छ । त्यसैले यस्ता लक्षणहरु देखिए भने तुरुन्त डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ ।
हातखुट्टा सुन्निनु=कलेजो अस्वस्थ भयो भने हातगोडा सुन्निन थाल्छ । पेटभन्दा तल पनि सुन्निएको महसुस हुन्छ । यदि हातगोडा धेरै नै सुन्निन थाल्यो भने कलेजोको अवस्था खतरनाक स्थितीमा पुगेको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
खाना मिठो नलाग्नु= खान मन लाग्दा लाग्दै पनि कुनै पनि खानाको स्वाद थाहा हुँदैन । त्यसैगरी बारम्बार स्वाद फरक लाग्ने र मुखबाट अर्कै गन्ध आउन थाल्यो भने कलेजोको समस्या हुनसक्छ त्यसैले समयमै उपचार गराउनुपर्छ । (gnewsnepal.com बाट सभार)